Meel Walba ha Laga Dhigo “Silent Cry” Kaga Raysanay Qaaraankii Dhibka Badnaa – Rasaasa News
Mar 26, 2010 Jwxo-shiil, ONLF, Silent cry
Hungurigu waa dhibaato meel walba wuu kula gali, si xun u xoogsashadana dadka qaar bay sharaf la tahay, kuwaas oo uu hungurigood ka awood bato, ugu dambayntana waxaa ay hunguri xumadu la gashaa meelo xun xun.
Kolka aad tago Afrika adiga oo Kamarad iyo Jaakad wata ujeedadaaduna ay tahay reerkiinii soo arag, balse aad naftaada u sheegto in aad tahay dalxiis, kolka aad argto dad kaa dhafoor xun oo adiga uun wax ku waydiisanaya.
Maalmlo kolka aad joogto ayaad is odhan bal dadkan sawiro ka qaado si ay markhaati kuugu noqoto in aad tagtay Afrika, yaxyax waxaa ay kuwaas la kulmaan kolka dadka ay masaakiinta moodayaan ay yidhaahdaan sawir nagama qaadaysid waayo waad na gadan.
In arinkaasi dhab yahay bal eeg Silent Cry waxa ay ugu yeedheen, dhalinyaro ka dhoofay Yurub, oo dabadeena sawiradii ay ka qaadeen caruurta qaxootiga ah, ay Jwxo-shiil gacantiisa galiyeen.
Jwxo-shiil, oo meel walba u istaagay furashada jeebka bulshada Somalida Ogadeeniya ee dhibaataysan, ayaa bariyihii ugu dambaysay ay dadweynuhu ku baraarugeen in uu ka xoogsanayo oo kaliya, waxayna joojiyeen lacago badan oo ay ku taageeri jireen halganka, ka gadaalse ay ogaadeen in ay galaan jeebka Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, oo tababar dad shiilnimo ah siiyey kooxo beeshiisa ah, ayaa waxay badaleen Nidaamkii lagu hongoobay ee lagu xoogsan jiray, waxayna soo sawireen dabadeedna sheeko raaciyeen, sawiro ay ka soo qaadeen dad qaxooti ah oo masaakiina ah una baahan in wax loo qabto.
Muuqaaladaas waxay ka dhigeen in ka badan 10 wadan lacagta ka soo baxdayna hal sano way masaariifi lahayd dadka qaxootiga ah ee laga qaaday taswiirta ee degan Dhadhaab. Waana arinkii kolkii hore sawirada lagaga qaaday dadka in wax loogu qaban doono, nasiib daro lacagahaasi waxay galeen Jwxo-shiil oo kaga raystay lacagihii qaaraanka ahaa ee ay dadku joojiyeen. “Meel walba ha laga dhigo waan kaga raysanay qaaraankii dhibka badnaaye” sidaasna Jwxo-shiil, ayaa laga hayaa, kol isaga oo xanuunsan uu galay hool lagu dhigayey muuqaalada.
Meel kasta oo muqaalkaas lagu dhigo waxaa dadka u yimaada in ay fiirsadaan lala hoos ordaa dabiilo lagu tuugsanayo, oo ay dadka intiisa badani yaxyax wax ku bixiyaan, markhaati waxaa arinkaas u ah muuqaaladii aad dhawaan ka daawateen UNIVERSAL TV.
Waxaan dib u fiirsaday Riwaayadii lagu dhigay Kaalinka 5aad ee uu sameeyey Macalin Dhoodaan “Dhari Reer Miyaa Dhul Lagu Xorayn”, Jwxo-shiil sawirada Qaxootiga laga qaaday u malayn maayo in ay qaaraan u badali, balse taswiir dambe ayaan Qaxootiga dib oo dambe looga qaadi doonin.
Dhalinyarada, qaaday sawirada, waxaa aad u qruxsanaan lahayd in waxa ka soo bax sawirada ay wax ugu qabtaan dadka qaxootiga ee ay soo taswiireen, arinkaas oo wax tar u noqon lahayd iyaga iyo dhalaanka qaxootiga ah ee dhibaataysan, aduunyaduna ay ku taageeri loona arki in ay yihiin dad shaqo wanaagsan qabtay.